Mon, Aug 20, 2018 | 14:16:37 NST
मधेसको आन्दोलन र चुनावी माहौल
निर्वाचन नै वास्तविक जनादेश हुने भएकाले हरेक राजनीतिक दलहरु आफ्ना एजेण्डाका साथ चुनावमा जानुपर्छ । दलहरुले बोकेका एजेण्डामा नागरिकको साथ रहेको नरहेको चुनावले नै निर्धारण गर्दछ । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका हरेक मुलुकमा चल्दै आएको चलन पनि यहि नै हो, र उपयुक्त व्यवस्था पनि ।
आमाको माया कस्तो हुन्छ ? आमा नहुँदा कतिपटक रुनुपर्दो रहेछ ? यो त केवल आमा गुमाइसकेकालाई मात्र थाहा हुन्छ । हेर्दाहेर्दै ६ वर्ष पुगेछ आमाले हामीलाई छोडेर जानुभएको । आमा गुमाउँदा दूधे बालक रहेको भाइ पनि अहिले ६ वर्षको भैसक्यो ।
‘........ठूलो रिस्क लिएँ दाजी’ स्टुडियोमा छिरिसकेर कुर्सीमा बस्दै गर्दा उनले भने, ‘नाम त कमाएँ तर सम्झिँदा कहाली लाग्छ कत्रो रिस्क लिएँ भनेर ।’ हो पनि सञ्जयको त्यो रिस्कलाई अति महत्वकांक्षा, ढिपी र हावा कुरा पनि भन्ने गरिएको थियो ।
उत्तरतिर रहेको ‘इन्डो गंगेटिक’ मैदान, जहाँ हाम्रो तरार्इ अबस्थित छ । यसको क्षेत्रफल ३३९९८.८ वर्ग किलोमिटर र पुरै नेपाल हिसाब गर्दा २३.१५ भूभाग ढाकिएको क्षेत्र नै हाम्रो तराई – मधेस हो । यो हिन्द कुश हिमालयन क्षेत्र हो । नदी किनारमा मानवीय वस्ती विकसित भएको हो ।
मलाई अब्जरवेशन कक्षामा राखिएको झण्डै १२ घण्टा भइसकेको थियो । २४ घण्टासम्म पानीको एक थोपा पनि मुखमा परेन । त्यो पीडा शब्दमा कसरी लेख्ने र ! पानी मागें । तर, कसैले दिएनन् । छेउका अरु बेडमा साना बच्चा रोएको आवाज सुनिन्थ्यो ।
एउटा दैनिक अखबारमा “कतारमा एकै गाउँका पाँच सय” शिर्षकको खबरले मन निचोरिए जस्तो भयो । अर्घाखाँचीको मालारानी–५ को यो समाचार पढेपछि मन गाउँघरतिर गयोे । आफ्नै गाउँलाई नजिकबाट नियालें । पात्र खोज्न रत्तिभर समय लागेन । आफ्नै गाँउका अंकल, दाइ तथा भाइहरु आँखैभरि घुमे ।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर देउवा असक्षम भएकै हुन् त ?
निर्वाचन आयोगले समेत मिल्दैन, हुँदैन भन्दाभन्दै सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई देखाउँदै दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेको छ । यो निर्णयसँगै असार १४ गते तोकिएको चुनाव कुनै हालतमा सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धतामा ठेस लागेको छ ।
एउटा सम्बोधन बिनाको पत्र । सम्बोधन गर्न कुनै नाता नभेटीएकोले सम्बोधन बिनै लेखिएको पत्र । काल्पनिकता लागेमा संयोग मात्र हुनेछ, यो पत्र । तिमीलाई याद छ की छैन, २०६२ पुस १७ गते हाम्रो दोस्रो भेट भएको थियो ।
कतै तपाईंको शरीरमा पानी कम भएको त छैन ?
शरीरलाई जति मात्रामा पानी चाहिन्छ, त्यो भन्दा कम हुनु जल वियोजन हो । जलवियोजन हुने धेरै कारणले हुन्छ । जसमध्ये गर्मी पनि एक हो । एकदम गर्मी भएको छ, शरीरबाट पसिना धेरै आएको छ ।
भारतले जित्ला कि हार्ला ?
जत्रो लक्ष्य लियो त्यसले दिने दबाब र तनाब पनि उत्रैै हुन्छ । जस्तो भारतको क्रिकेटलाई हेरौं । च्याम्पियन्स ट्रफी बोकेर मात्र घर आउने लक्ष्य लिएर बेलायत उडेको भारत समूह चरणको खड्गो नै काट्दैन कि भनेजस्तो अवस्थामा पुग्यो ।
‘नागरिकले महसुस नगर्दासम्म कुनैपनि अंक वा डाटाले मात्र अर्थव्यवस्था सुदृढ भएको म मान्दिन’ नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यहि वाक्य मार्फत गभर्नर तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका विज्ञलाई एकैसाथ ‘पञ्च’ हाने ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्य र सुधारको बाटो
देश संघीय संरचनामा गएपछि पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हिजोको शासन प्रणालीको प्रकृति फरक किसिमको थियो । लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेको अवस्था थियो ।
राजनैतिक संस्थाहरु कुन प्रजात्रान्त्रिक पद्दति अपनाइएको छ त्यसैका आधारहरुमा रहेर खेलको नियम बनाउँछन । सामान्यतया चुनावमा संविधान, विधान र कानुनसम्मत भोटलाई सिटमा उल्था गरिने हो, जुन जित्ने व्यक्तिले शक्ति हात पार्छ ।
अस्पताल भर्ना भएको दिनदेखि नै दुई-दुई घण्टामा केही न केही खानैपर्ने थियो । अपरेशन गर्ने भनेपछि एक थोपा पानी पनि नखाएको १२ घण्टा भन्दा धेरै भइसकेको थियो । तर, अपरेशन असफल भयो । अपरेशन असफल भएर बेडमा फर्किएलगत्तै मैले खनेकुरा मागेँ ।
सफलताको सनकमा बटुवामाथि खनियो ट्राफिक प्रहरी
काठमाडौका गाडी चालक आजकाल उपत्यका बाहिरका पोखरा, चितवन र हेटौडा पुग्दा बेचैन हुन्छन् । कारण हो, उपत्यका बाहिर टाउको झनन्नै हुने गरेर जथाभावी बज्ने गाडीका हर्न । काठमाडौमा गाडी चलाउने धेरै चालक महिना दिन नपुग्दै जथाभावी हर्न नबजाउन बानी परिसके । तर, नागढुंगा र साँगा पार गरेपछि जथाभावी बज्ने हर्नको ट्या..., ट्या र टुँ ..टुँ.... ले आजकाल त्यता जाँदा मथिंगल खल्बलिन्छ ।
रञ्जु दर्शनालाई खुला पत्र - खेल हारे पनि म्यान अफ द म्याच भयौ
काम कम कुरा बढी गर्नेहरुको शहर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्यौ । रिटायर्ड लाइफमा पेन्सन खाँदै समाजसेवाको नाममा राजनीति गर्नेहरुको भिडमा तिमी एक्लो वृहस्पति थियौ जसले युवाको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् ।
दूधमा शरीरलाई चाहिने प्रोटिन, सन्तुलित रुपमा ल्याक्टोज् अर्थात ग्लूकोज हुन्छ । शरीर वृद्धि विकासमा अति आवश्यक प्रोटिनको मात्रा दूधबाट पाइने हुनाले दिनहुँ पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । यसले शरीरलाई शक्ति दिन्छ । दूधमा भिटामिन बी–१२ पनि पाइन्छ ।
यो समय डेंगु देखिने समय नभएकोले चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ताको पनि आश्चर्यको बिषय भएको देखिन्छ । अध्ययनले डेंगु संक्रमण नेपालमा खासगरी मनसुन सकिए लगतै प्रकोपको रुपमा देखा पर्ने गरेको देखाएका छन् ।
लोकतन्त्रको चीरहरण भएको त्यो मध्यरात
भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडा मध्ये २७ वटा वडाको मतगणना सकिँदा नेकपा एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवाली नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालभन्दा सात सय ८४ मतले अगाडि हुनुहुन्थ्यो । बाँकी दुई वटा वडाले भरतपुरको मेयरको टुङ्गो लगाउँदै थियो ।
‘अप्रेशन थिएटर’ लेखिएको शब्द धेरै पटक देखे पनि जिन्दगीमा पहिलो पटक छिर्दै थिएँ । चिकित्सकले अप्रेशन गर्नुपर्छ भनेपछि लगातार आधा घन्टा आँसु रोकिएका थिएनन् । भर्खरै अप्रेशन गरेका नानीका आमाहरुले थुप्रै सम्झाए पनि आँसु झरिरहे ।
ती म्याजिक चप्पल, यी मानपदवी
गणतन्त्रका ९ वर्षबारे केही लेख्न बसेको, खबरहरु आकाआकै छन् । जसले विथोलिरहेका छन् । त्यही भएर मेरो ब्लग यसो हेर्दै, केर्दै र फेरि लेख्दै गर्नुपरिरहेको भूपि यथार्थ भोगिरहेको छ । कुराको शुरुवात मानपदवीबाट गर्नुपर्ने भयो ।
सूर्य, एमाले र विद्यासुन्दर शाक्य
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौंका निर्विकल्प एमाले अगुवा बन्नु भएको छ । शाक्यले पार्टी अनुशासनका साथै लोकप्रिय मतमा समेत यसअघिका एमालेकै मेयर केशव स्थापितलाई पछाडि पार्नुभएको छ ।
नयाँ सिल्क रोड : चीन र भारतबिच नेपाल कहाँ ? (भाग २)
नेपाल आफै स्वत्रन्त्र, सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । टेरीटोरियालीटि प्रक्रियामा हेर्दा, आफ्नै औपचारिक र अनौपचारिक सँस्थाहरु छन् ।
नयाँ सिल्क रोड: चीन र भारतका स्वार्थबिच नेपाल कहाँ ?
१३औं शताब्दी ताका एसियाबाट युरोप र मध्यपूर्वको व्यापारमा हिड्ने सिल्करोडमा दिखिने काराभान र मरुभूमिमा देखिने जादुमय पदचापहरुको पुनर्कल्पनाबाट २०१३ मा नयाँ सिल्क रोड (One Belt One Road), जन्मियो !
राजीनामाको बेला दाहालले देउवालाई नभनेका तर नागरिकको मनमा गुम्सिएका प्रश्न
विपक्षीले समेत नछाड्नु भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नैतिकताको खडेरी तोड्ने भन्दै राजीनामा दिनुभयो । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेससँग भएको सहमतिको पालना गर्दै उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो ।
देशबासीको सम्बोधनमा प्रचण्डले के–के भने (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
काठमाडौं, जेठ १० – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुभएको छ ।
कांग्रेस पछि, एमाले अघि किन ?
यो निर्वाचनमा नागरिकले एमालेलाई सवैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएका छन् । वास्तविक विजेता एमाले नै हो । सबै ठाउँमा कसैले पनि जित्दैन ।
अहिलेसम्म पाएको मतले राम्रै गरेछु जस्तो लाग्छ
मेरो नाम शोभा शाक्य हो । मेरो जन्म २०२० सालमा ललितपुरको ओपोबहालमा भएको हो । मेरो कर्मभूमी थैना, लामोगलमा हो । मैले आइएसम्मको पढाई पाटन क्याम्पसबाट पूरा गरेकी हुँ । हामीले त त्यती बेला सरकारी स्कुलबाट नै पढाई पुरा गरेको हो ।
उम्मेद्वार र जनप्रतिनिधिको पारदर्शिता र जवाफदेही
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले हाम्रो मुलुकको राज्यव्यवस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरेको छ । वर्तमान व्यवस्थाअनुसारको स्थानीय तहलाई प्रक्षेपित अधिकारबाट यस तहबाटै नागरिक र सरकारबीच सर्वाधिक निकटस्थ सम्बन्ध कायम हुने देखिएको छ ।
कुलमान भ्रष्ट ठहर भए म पनि देश छोड्छु
यो लेख म आफ्नो रहरले लेखेको हैन । मेरो निजी विचार र भावनालाई पोख्नको लागि पनि लेखेको होइन । उर्जा बचतको लागि एलएडी बल्ब खरिद गर्न लाग्दा आफूमाथि लागेको आरोपमाथि कुलमान घिसिङले स्पष्टिकरण दिने बखतमा उनका आँखामा टिलपिल भएको आँसुले यो लेख लेख्न बाध्य बनाएको छ ।
यसरी हाल्नुपर्छ भोट (भिडियोसहित)
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखकोे लागि एक ठाउँमा, उपप्रमुखको लागि १ ठाउँमा, वडाध्यक्षको लागि एकठाउँमा, महिला वडासदस्यको लागि एक ठाउँमा, दलित महिला सदस्यको लागि एक ठाउँमा र २ जना खुला वडा सदस्यका लागि २ ठाउँमा मत दिनुपर्छ ।
हाम्रो शरीरमा भएको भित्री अंग मध्ये सबैभन्दा ठूलो अंग कलेजो हो । कलेजो ठूलो भएसँगै यसका काम पनि थुपै्र छन् । यसले शरीरमा रहेका विभिन्न टक्सिनलाई बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ । कलेजोले कार्बोहाइड्रेड, फ्याट, प्रोटिन स्टोर गर्ने काम गर्दछ ।
२०७३ सालको चैत अन्तिम हप्ता एकजना बिरामी टेकु अस्पताल आए । उच्च ज्वरो, जीउ र जोर्नी दुख्ने जस्ता समस्याले ग्रसित उनलाई चिकनगुनियाको संक्रमण देखियो । पूर्वी तराईको भ्रमणबाट फर्केका उनलाई लामखुट्टेले टोकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
‘लाइफलाइन’ सडकमा १७ घन्टे सास्ती
आमाले भन्नुभएको थियो, सोमबारको जागिर भेटाउन आइतबार बिहानै हिँडे हुन्छ । एकदिन भएपनि घरमा बस बाबु । एकपटक त मेरो मनले पनि सोचेको थियो, अब अर्कोपटक घर आउने दसैँमा होला, एकरात भए पनि बढी बसौं क्यारे ।